आज सार्वजनिक हुँदै ‘आइफोन-१२’, कति पर्छ मूल्य ? - Jyotinews
आज सार्वजनिक हुँदै ‘आइफोन-१२’, कति पर्छ मूल्य ?
ज्योतिन्यूज २०७७ असोज २७ गते १७:०६
२७ असोज, काठमाडौं। अमेरिकी मल्टिनेसनल टेक्नोलोजी कम्पनी एप्पलले आइफोन सिरिजका नयाँ मोबाइल आज सार्वजनिक गर्दैछ। जसको लागि आज बेलुका एप्पलको भर्चुअल इभेन्ट गरेर आईफोन ट्वेल्भ सिरिज सार्वजनिक हुने भएको हो । आइफोन १२ सँगै एप्पलले नयाँ एप्पल टिभी स्ट्रिमिङ बक्स, एयरपड्स स्टुडियो, एयर ट्याग्स, होमपोड स्मार्ट स्पिकर लगायतका उपकरण पनि सार्वजनिक गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
आज सार्वजनिक हुने आइफोन १२ वा आइफोन १२ मिनी ९५.४ इन्चको सम्भावित मूल्य ६४९ अमेरिकी डलर रहेको छ । आइफोन १२ म्याक्स ९६।१ इन्च० को सम्भावित मूल्य ७४९ अमेरिकी डलर, आइफोन १२ प्रो ९६।१ इन्च०को सम्भावित मूल्य ९९९ अमेरिकी डलर , आइफोन १२ प्रो म्याक्स ९६।७ इन्च० को सम्भावित १,०९९ अमेरिकी डलर रहेको छ।
आईफोन ट्वेल्भ लाइनअपमा चार नयाँ आईफोन मोडेलहरू हुन सक्छन् । यसअन्तर्गत ५.४ इन्चको आईफोन ट्वेल्भ मिनी, ६.१ इन्चको आईफोन ट्वेल्भ, ६.१ इन्चको आईफोन ट्वेल्भ प्रो र ६.७ इन्चको आईफोन ट्वेल्भ प्रो म्याक्स रहेका छन्। सबै चार मोडेल फाइभजी फोन हुन सक्छन् ।
आईफोन ट्वेल्भ प्रो म्याक्समा थ्रीडी डेप्थ सेन्सिङ टेक्नोलोजी रहने छ । सँगसँगै कम्पनीले यसपटक आईफोन ट्वेल्भ वा आईफोन ट्वेल्भ म्याक्सलाई प्रिमियम मिड रेञ्ज मोडलको रुपमा बिक्री गर्नेछ । जबकि आईफोन ट्वेल्भ प्रो र आईफोन ट्वेल्भ प्रो म्याक्सलाई फ्ल्यागशिप डिभाइको नाम दिइनेछ । यी मोडलमा फाइभजी र ओएलईडी डिस्प्ले सपोर्ट हुनेछ ।
फोटोग्राफीको कुरा गर्दा आईफोन ट्वेल्भमा नयाँ अनुभव गर्न मिल्नेछ । प्रिमियम मिड रेञ्ज फोन आईफोन ट्वेल्भ र म्याक्समा डुअल क्यामेरा हुनेछ । बाँकी मोडलमा भने ट्रिपल क्यामेरा फिचर हुनेछ । यसमा खास कुरा त के हुनेछ भने यस पटक एप्पलले चारवटै फोनमा शक्तिशाली क्यामेरा सेन्सर प्रयोग गर्नेछ ।
प्रो मोडल्समा वस्तुको दूरी मापन गर्न लिडार सेन्सर प्रयोग हुनसक्छ । किनकि आईप्याड प्रोको हाई ईण्ड मोडलमा यसअघि नै लिडार स्क्यानर राखिएको छ । नयाँ आईफोनमा एप्पलको लेटेस्ट प्रोसेसर हुनेछ । खबरहरुका अनुसार नयाँ आईफोन ट्वेल्भमा ए फोर्टीन बयोनिक चिपसेट देख्न सकिनेछ । जहाँ बजेट मोडल ६४ जीबी, १२८ जीबी र २५६ जीबी अप्सनमा उपलब्ध हुनेछन् । सँगसँगै टप ईण्ड मोडलमा १२८ जीबी, २५६ जीबी र ५१२ जीबीको स्टोरेज प्राप्त हुनेछ ।